Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Faallo: Deegaanku Jijiga Ma wada ahan, dalkuna ka wayn!
Faallo: Deegaanku Jijiga Ma wada ahan, dalkuna ka wayn!
September 28, 2011 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Laga soo bilaabo sanadkii 1995 waxyar kadib markii caasimadda deegaanka loo soo baddalay magaalada Jijiga waxaa muuqata in dhamaan kaabayaasha dhaqaalaha, dhismayaasha iyo hormarkaba ay noqoto caasimadda Jijiga taasoo ka dhigtey in dadweynaha Deegaanka dal iyo dibadba ay kusoo qulqulaan Jijiga iyagoo raba iney ka faaiideystaan hormarka iyo suuqa xaamiga ah ee kajira caasimadda Jijiga.
Waa sax in Jijiga ay noqoto muraayadda deegaanka ayna yeelato waxwalba oo ay caasimadi u baahan tahay balse ma ahan in Jijiga kaliya ay noqoto meesha kaliya ee dawladdu ka hirgaliso mashaariicda hormarka.
Gobolada deegaanku waa sagaal hadda waloow laga yaabo iney tiradaas ka bataan maaddaama oo dagmooyinkii la badiyay si loo dheeli tirka awoodda gobolada. Caasimada gobolada marka aad ku wareegto waxaad arkeysaa ineysan sameynin hormar badan marka laga reebo dhismayaal ay dad gaar ah sameysteen oo aan badneyn. Arintan waxaa keenaya in qofwalba oo awood leh hantina haysta ama raba ganacsi uu kusoo taamo magaalada Jijiga oo uu isaga soo tago magaaladii uu joogey. Arintani waxey keeneysaa in caasimadda Jijiga ay dadku ka bataan dhamaan adeegyaduna hoos udhacaan dadka iyo magaaladuna kala bataan. Biyaha caafimaadka, waxbarashada ayaa noqdey kuwa cidhiidhi ah iyadoo dadkii deegaankuna ay dareemeen cidhiidhi aysan awal aqoon u lahayn kuna adkaatey iney aqbalaan.
Maaddaama deegaankeenu yahay mid aad ubalaadhan waxaa adkaaneysa in shacabka deegaanku ay usoo wada kacaan magaalada Jijiga iyagoo doonaya nolol, shaqo waxbarasho ama fursado ganacsi iwm. Way adagtahay qofka jooga Mooyaale inuu Jijiga uyimaaddo ama midka Jooga Dooloow amase feerfeer.
Qurba Joogta Deegaanka
Qurba Joogta Deegaanka oo baryahan danbe kusoo qulqulaya Deegaanka ayaa iyaga laftigoodu u muuqda kuwa raba iney joogaan magaalada Jijiga iyagoo raba dhul iyo fursado ganacsi. Sababtuna waxaa weeye iyagoo Jijiga ka heli kara waxwalba oo ay ubaahdaan; Amni, Nadaam iyo hawlfulin. Xitaa haddii ay damcaan ama ay rabi lahaayeen iney tagaan goboladii ay ka yimaaddeen waxay ka yaabaan iney ka waayeen waxa ay Jijiga ka helayaan. Arintani ayaa keeneysa in waxwalba Jijiga laga doono .
Maxaa la gudboon DDS?
Si loo dadajiyo hormarka deegaanka si garba simanna loogu wado oo magaalo walba u noqoto mid kobcaysa waxaa laga maarmaan ah in xukuumaddu qaadato talaabooyin lagu hubinayo arimahaas. Iyadoo ay jiraan arimo badan oo la sameyn karo haddana waxaa haboon in Xukuumaddu isku daydo in la helo magaalooyin badan oo leh adeegyadii ay magaalo u baahneyd, leh ilo dhaqaale iyo magaalo leh soo jiidasho maalgashi iyo ganacsi.
Haddaba si loo helo arimahaas xukuumaddu waa iney maalgashadayaasha ku dhiiriso una sahasho iney gobolada dalka tagaan kana sameeyaan maalgashi iyagoo usahlaya arimahaas.
Jijiga, Qabridahare, Godey iyo Dhagaxbuur waxey buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa iney noqdaan is maamul waxeyna hadda ku jiraan tijaabo. Sidaas darteed si loo sahlo usinaanta adeegyada deegaanka iyo fahamka baahida gaarka ah ee shacabka waa in Xukuumaddu sameyso magaalooyin aan ahayn Jiijiga oo loo aado adeegyo gooni ah. Filtu, Hargeele ama Shiniile ama Wardheer iyaguna waa iney noqdaan magaalooyin yeesha dhamaan adeegyada lagama maarmaanka ah.
Jijiga ma Muqdishay Noqoneysaa?
Mar haddey caddahay in magaalada Jijiga aysan ku filnaan karin baahida mujtamaca Deegaanka oo dhan waxaa muhiim inaan Xukuumaddu ka fikrito sahalka arimahan.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa noqotey waddan dhan oo lahaa hal magaalo. Dhakhtarada ugu waaweyn, Jaamicadda waddanka iyo dhamaan waxii wasaarado ahaa oo dhan waxaa lagu aruuriyay Muqdisho taasoo keentey in qof walba oo Soomaali ah ay ku adkaato inuu Muqdisho gaadho.
Si aysan udhicin arimahaas waa in xukuumadda Deegaanka Soomaalidu indhaha furto ayna dardar galiso hormarka dagmo walba si loo helo caasimado isla kora oo isku dheeli tiran. Dagmooyinkii dhawaan la ansixiyay waxey deegaanka kusoo kordhin karaan in dad badan ree guuraa ahi dagaan taasoo waqtiga dheer faaiido u ah shacabka deegaanka.
Magaalada Jijiga maqaadi kareyso 4 Million baahidooda waxaana wanaagsan in loo sameeyo magaalooyin badan oo dabooli kara baahida dadka maxalliga ah si looga maarma socdaalka dheer ee Jijiga.
Waxaa loo baahan yahay in xukuumaddu bilawdo iney adeegyada lagama maarmaanka ah ama xafiisyada qaarkood ay udhaadhiciso dagmooyinka ama caasimadaha waaweyn si loo yareeyo socdaalka asyan dantu qasbin ee dadku u yimaaddaan Jijiga.
Isticmaalka Boostada iyo Isgaadhsiinta
Xukuumadda Deegaanku aad uma isticmaasho Boostada iyo Isgaadhsiinta Deegaanka waana muhiim in hawlaha yaryar oo dhan lagu qabto dhanka diraalka waraaqaha si loo yareeyo socdaalka, loona kaydiyo lacagaha ku baxa shidaalka. Tusaale ahaan haddii qof jooga magaalada Qabridahare damco inuu sameeysto shirkad Qandaraasle ah muhiim ma ahan inuu yimaaddo Jijiga si uu arintaas u sameeyo waxaa ka sahlan inuu helo codsiga, buuxiyo kadibna uu boostada soo dhigo dibna loogu soo celiyo marka hawluhu udhamaadaan waxiii kharash ahna uu kusoo bixiyo Bangiga. Magaala walbana waa laga sameyn karaa. Balse xaalka hadda jira suura gal ma ahan waayo waxaa dhacda adigoo oo jooga Jijiga inaad arki weydo wasiirka maxaad u maleyn haddii aad waraaq soo dirto.
Deegaanka intaas le eg waxaa ku qasab ah muwaadhin walba oo damca inuu baasaboor qaato inuu Jijiga yimaaddo iyadoo ay ku qaadato waqti dheer isla markaana kharash badan kaga baxo. Bal ka waran haddii ay suuro gal tahay in caasimadaha gobolada qaarkood ay awood u leeyihiin iney qabtaan codsiyada soona diraan ama uu si gooni ah loosoo qaado marka ay is gaadhaan, shuruudaha oo dhanna la dhameystiro dabadeedna Jijiga loo keeno dhameysir kadibna loo adeego dadka iyagoo meeshoodii joogana loo geeyo baasaboorka ama loogu yeedho qaadashada kaliya.
Dawladdu waa midda iyadoo laga maqanyahay ushaqeysa dadkeeda waana waxa loo baahan yahay in xukuumaddu xooga saarto waqtiyada soo aaddan.